New England Gay Weekend
Tsy ny renivohitry ny fanjakana voalohany ara-politika ihany no mandroso ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy, dia ao anatin'ny adiny telo amin'ny fiara tsy mifadivady sy ny toeram-pialam-boly tsy miankina, avy any an-tampon'ny Tendrombohitra Vermont sy New Hampshire mankany amin'ireo morontsiraka amorontsiraka ary Rhode Island - ary aza hadino ny fialan-tsasatra hafa any Massachusetts, avy any Cape na Berkshires. Ireto misy sasantsasany mahafinaritra izay mahatonga ny fialamboly pelaka mahafinaritra avy any Boston.
Mieritreritra ny fametahana ny knot amin'ny Cape? Jereo ny Provincetown Gay Wedding Guide.
sary nataon'i Andrew Collins
Any amin'ireo havoana, any andrefana any Massachusetts, ianao dia hahita ny Berkshires, faritra malaza amin'ny fandaharan'asam-pahaizana mandritra ny fahavaratra (avy ao amin'ny Tanglewood Music Center ho an'ny Fetiben'ny Williamstown) ary ny tranombakoka mandritra ny taona, anisan'izany ny MassMoCa sy ny Norman Rockwell Museum . Amin'ny lohataona, ity dia iray amin'ireo faritra avo indrindra any amin'ny faritra avaratra atsinanana mba hankalaza ny lohataona. Ny tanàna toa an'i Lenox, Great Barrington, Stockbridge, ary Williamstown dia mifamahofaho amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana fahiny, ary nanjary nanamafy ny fahatongavan'izy ireo koa ny tanàna miorina taloha tahaka an'i North Adams sy Lee. Ny faritra Berkshires dia manodidina ny halaviran-dàlana avy any Boston sy ny New York, ka mahatonga azy ho teboka tsara ho an'ny namana avy eo. Distance: 125 kilaometatra (2 ka hatramin'ny 2.5 hrs)
Ny andriamby mihazona eo an-tampon'ny Aquinnah Cliffs, taloha Gay Head Cliffs, dia miavaka amin'ireo mari-pamantarana maridin'ny Martha's Vineyard. sary nataon'i Andrew Collins
Ireo mpandeha GLBT mivezivezy any Cape Cod dia matetika mitazona hatrany amin'ny faran'ny lalana, Provincetown. Fa ny ambiny ao Cape kosa dia tena mahafinaritra sy feno fihatsarambelatsihy, toy ireo nosy malaza roa izay azon'ny alàlan'ny fiaramanidina na fiaramanidina avy any Cape, Nantucket sy Martha's Vineyard. Ity farany dia nahazo fitakiana fitomboam-bolam-panjakana taty aoriana raha nankalazaina tao ny filoha Clinton sy Obama. Ny nosy 100 kilaometatra isa-kilaometatra dia manome vahindanitra kely misy tanàna kely toa an'i Oak Bluffs, Vineyard Haven, ary Edgartown, ary faritra maro kokoa any amin'ny faritra ambanivohitra, izay ahafahanao mahita hikirakirana goavana, bisikileta, tora-pasika, ary lobster. Vitsy dia vitsy sady marefo amin'ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana, ny toeram-pambolena Martha dia malemy amin'ny lohataona sy lavo. Distance: 80 kilaometatra (mandeha amin'ny sambo)
Talohan'ilay Revolisiona Amerikana, ny tanàn-dehiben'i Newport, tanàna amoron-dranomasina, dia nalaina anisan'ireo tanàna dimy lehibe indrindra tao amin'ny Tontolo Vaovao. Avy eo tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19, dia nanjary toeram-pisakafoanana an-tanety izay nirotsahan'ireo indostrialy sasany mpanankarena amerikanina, avy any Vanderbilts ka hatrany Astors, i Newport tamin'ny taona lasa. Ity tanàn-dehibe miavaka sy toerana mahafinaritra ao amin'ny Nosy Aquidneck ity dia mbola tohatra tsara amin'ny mpanankarena sy malaza, fa ny hatsaràn'i hotely tsara tarehy sy trano fisakafoanana any Newport dia manintona amin'ny sehatra goavana. Ary na dia toerana fialokalofana mendrika indrindra aza izany, dia malaza amin'ny mpandeha GLBT. Maro amin'ireo tanàna goavana sy mendri-piderana no misokatra amin'izao fotoana izao ho an'ny fitsangatsanganana fitarihana ao anatin'io savaivan-dranomandry misy ranomandry io. Distance: 75 miles (1.5 hrs)
Northampton sy ny Lohasahan'i Pioneer
Ivon-toerana fanabeazana, ny zavakanto ary ny fandrosoana politika any afovoan-tany andrefan'i Massachusetts, izay mirefotra sady mora azo amidy, Northampton no mamaritra ny Pioner Valley, izay mivelatra avy any Connecticut mankany amin'ny sisintanim-panjakana miaraka amin'i Vermont sy New Hampshire ary mandray amina karazana fitiavana tanàna (Greenfield, Deerfield, Amherst) ary tanàn-dehibe iray feno haintrano sy mozika sasantsasany ary ny fiainana andavanandro any Springfield. Efa ela i Northampton no nalaza ho toerana mahafinaritra ho an'ireo lesbiana mba hipetraka sy hitsidika - dia tena malaza amin'ny lehilahy pelaka ihany koa . Ny College College Smith dia ivontoerana ara-kolontsaina kely, ary ny afovoan-tanàna afovoan-tanàna dia misy trano fialofana, trano fivarotam-boky, ary trano fisotroana mozika . Distance: 100 kilaometatra (1.5 ka hatramin'ny 2 ora)
Ogunquit sy Portland, Maine
Ny tanàna kely amoron-dranomasina ao Ogunquit sy Maine lehibe indrindra (pop-up 65,000), Portland , dia toerana roa samy hafa, saingy izy ireo dia samy tia fihavanana am-pitiavana sy mora tonga avy any Boston (ary ny iray hafa). Amin'ny endriny dia manao fialantsasatra lavitr'ezaka ao an-drenivohitra izy ireo. Ny Ogunquit kely dia somary lavalava sy somary fitaovana hafa ho an'ny Provincetown, miaraka amin'ireo B & Bs, toeram-pisakafoanana ary trano fisotroana vitsivitsy, ary tsara tarehy. Any amin'ny 35 kilaometatra avaratra, Portland dia manana sehatra ahitam-bokatra ho an'ny tanàna iray, ary misy boriborintany Old Port manana galleries sy boutique maresaka marobe, ary tantaram-piainana goavana any West End. Portland ihany koa ny tranokalan'ny fetiben'ny Prestige Maine any Maine . Izy io koa dia toerana tsara hanombohana ny fijerena ny morontsirak'i Maine manerana an'i Maine, mankany Rockland sy Bar Harbor. Distance: 110 kilaometatra (1,5 ka hatramin'ny 2 ora)
Misy fiara kely any avaratr'i Boston, Portsmouth dia vatosoa kely an-tanan-dehibe amin'ny alan'i New Hampshire ao atsinanan'ny Ranomasimbe Atlantika - any avaratr'i Maine ary akaiky ny vohikalan'i Ogunquit sy Portland voalaza etsy aloha. Ny tanàna dia fanta-daza amin'ny tranobe kolonialina maro, ary maro amin'izy ireo no voatahiry ao amin'ny tanàna manan-tantara izay ahitana ny Museum of Strawbery Banke. Ny tanàn-dehibe 20.000 dia miorina ao afovoan-tanàna mijery ny Reniranon'i Piscataqua ary mifanakaiky amin'ny nosy misy ny tanànan'i New Castle sy ny hotely Wentworth-by-the-Sea. Ny sehatry ny pelaka eto ambany dia ambany, tsy misy ny fiainana an-jatony mba hiresahana, fa tanàna mahafinaritra sy mahafinaritra miaraka amin'ny B & B maro tsara. Distance: 55 miles (1 hr)
Ny hopitaly haingana I-95 avy any Boston, ny tanàn-dehibe faharoa lehibe indrindra any New England, dia iray amin'ireo kodiarana tsy dia mendrika loatra, izay mandalo indraindray ny mpandeha an-trano, fa ny mpankafy ny sakafo, ny zavakanto, ny mozika mivantana, ary ny fananganana kolontsaina. Ny Providence dia ivon-toerana manan-danja fianarana (trano ho an'ny Anjerimanontolon'i Brown, School of Design Design, ary University of Johnson & Wales eo anelanelan'ny hafa), ary ny ampahany dia mitantara ny isa azo itokisana sy hita maso. Ny kely kokoa ny fanindroany an'i Boston, ny Providence ihany koa dia manana toeram- pandihizan'ny fiainana andavan'andro . Ny lohataona sy ny lohataona no fotoana mahafinaritra indrindra hitsidihana ity tanàna feno hobim-pifaliana ity, any an-tanindrazan'ny iray amin'ireo tanàna vitsy "Little Italy" ao amin'ny firenena. Manana ny Pridefest Rhode Island ny volana Jona. Distance: 50 miles (50 min)
Na dia any amin'ny tendron-tany lavitra be ao Cape Cod aza , ny tanàn-dehiben'i Provincetown, tanàna malaza indrindra eran-tany , dia mora mora hita any Boston, na amin'ny fiara isan-taona na amin'ny alalan'ny fiarandalamby haingana avy amin'ny lohataona. Io tanàna mpanjono manan-tantara io (ireo Pèlerins nijanona teto dia tamin'ny taona 1620) dia nanamboatra Bohemian taorinan'ny nosy artista sy ny teatra tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 ary dia toerana tena ankafizin'ny lesbiana sy pelaka hatramin'izao. Ny moron-dranomasina ao amin'ny Seobotan'ny National Cote de côte d'Ivoire dia anisan'ireo kely indrindra ao amin'ny faritra avaratra atsinanana, ary ny Street Commercial dia misy fomban-trano , gay, trano fisakafoanana tsara , ary trano fonenan'ny pelaka . Na dia ririnina aza dia mahafinaritra ny P-Town. Ny tanàn-dehibe ihany koa dia iray amin'ny fanomanana ny fampakaram-bady gay . Distance: 110 kilaometatra (2 ka hatramin'ny 2.5 hrs)
Ny firenena iray manontolo ao Vermont dia manolotra fiononana tsy tambo isaina, fa avy any Boston kosa ny fialan-tsasatra tsara indrindra dia tokony hifantoka amin'ny antsasaky ny fanjakana ambany ambany kokoa, izay maka toerana any amin'ny ski toy ny Killington (sary etsy ambany), Stratton, ary Mt. Ny oram-panala, ary koa ny famoahana tsy misy farany ny tanàna sy ny tanàna ambanivohitra. Basen tsara - miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny tsara tarehy sy trano fisakafoanana romantika - tafiditra ao Manchester sy Woodstock. Ny tanàna madinika toa an'i Arlington sy Grafton dia tena malaza. Ity fanjakana ambanivohitr'ity tontolo ity sy ny tontolo iainana dia ny voalohany ao amin'ny firenena no mamaritra ny lalàna momba ny fiarahamonim-pirenena momba ny fiarahamonim-pirenena (ny zo feno zo amin'ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy), ary ireo mpandeha GLBT dia hihaona am-pitiavana manerana ny faritra. Burlington tsara tarehy, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny fanjakana, roa ora latsaka sisa no avaratra. Distance: 150 kilaometatra (2,5 hatramin'ny 3,5 hrs)
Ny Tendrombohitra Fotsy, New Hampshire
Ny Tendrombohitra White New Hampshire any avaratra atsinanan'i New Hampshire dia ahitana ny tampony avo indrindra any amin'ny faritra avaratra atsinanana ary fialamboly malaza ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny bisikileta amin'ny fahavaratra, ny ravin-tsavony lavo, ary ny skiing sy ny ranomandry mandritra ny ririnina. Ny tanànan'i Bethlehem, tanàna manan-tantara, dia tranon'ny Highlands Inn, iray amin'ireo tanàna madinika indrindra any amin'ny firenena. Na dia samy mitokana aza ny faritra ary misy mpandala ny nentin-drazana (amin'ny fomba malalaka), ireo mpandeha GLBT dia hahita fanahy goavana maro ao amin'ireo toeram-ponenana ao Jackson sy Franconia, ary toeram-pialamboly malaza toy ny Bretton Woods, Loon Mountain, ary Waterville Valley . Aoka ho azo antoka fa hitsidika an'i Mt. Ny tantaran'i Cog Railway Washington, ary mitondra ny làlambe Kancamagus Highway (sary eto ambany). Distance: 120 miles (2 hrs)
Ny tari-dàlana manan-danja amin'ny ski ski resort Sugarloaf
Fetin'ny volana Aogositra, fankalazana ary zava-nitranga manokana - ny atsimo atsinanan'i Etazonia
Fivoriana amin'ny faran'ny herinandro vaovao any Angletera 2017
Aiza no hankalazana an'i Martin Luther King, Jr. miaraka amin'ny ankizy
Toerana fialantsasatra tsara indrindra manerana an'i Etazonia
Inona no nitranga tamin'i Virginia?
Tsiambaratelo an'ny Grand Central Terminal
Lesley Reader sy Lucy Ridout ao amin'ny The Guide to Rough to Azia Voalohany
Toerana feno faniratsirana ao Minneapolis sy St. Paul
Arizona Mills, Sealife Arizona ary Legoland Tempe Map
Herinandro (Septambra hatramin'ny Desambra) Kalandrien Gay Pride 2016
Ilay tranombakoka Mashantucket Pequot
Tanjona tsara indrindra hitsidihana an'i Lleida
Ny Krismasy tsara indrindra any San Antonio
3 Ny tambajotra sosialy lehibe mba hanomanana ny dianareo manaraka
Masseria mipetraka ao Puglia
Inona no atao any amin'ny Disney World rehefa avy ny orana
Ireo zavatra 8 lehibe tokony hatao ao amin'ny Colaba Neighbhorhood ao Mumbai